Uhambo lweSixeko kunye nokujonga indawo kunye neTransfer Service Basel -
Abathengi bethu kuphela - kunye neentsapho kunye namaqela ukuya kwi-7 yabantu - sinika ithuba lokuhamba ngokukhululekile kwelinye lethu i limousines ezindala kunye neenhle on.
Ngokukodwa kwiinyanga zasehlotyeni, iBasel ithatha abavakhenkethi abaninzi abafuna ukufumana izixeko ezikufutshane eSwitzerland, eFransi naseJamani. Ngenxa yendawo yethu ebalulekileyo singenza uhambo lwakho lweedolophu lukhululekile kunokwenzeka. Uninzi lwabaxumi bethu bezo shishino banandipha ithuba lokudibanisa ishishini kunye nobumfihlo kunye nokukhokelwa ngabaqhubi bethu abanamava ngaphandle koxinzelelo lwezoshishino kunye nokuhlolisiswa koluntu, kungekuphela nje kwimiba, kodwa kunye neengcebiso ezimbalwa kunye bonise.
Inkonzo yeLimous kwiihotele zedolophu ezikhululekile kakhulu entliziyweni yeYurophu
Umqhubi wethu akukhombisi nje kuphela, kodwa ngokukhawuleza, ngokuqonda nangokukhuselekileyo ukuya kwindawo oya kuyo. Ukusuka eBasel, indawo ehlukahlukeneyo endleleni eya kwisixeko okhethileyo ihamba kakuhle.
Fumana iZurich kwi-limousine
Iqanda Emva kokuhamba kweyure ukusuka eBasel ukuya eZuriki, unokuchitha ixesha elihle kwi-limousines yethu yaseJamani. Ukongeza kwizitrato eziphakathi kwidolophu yaseRoma yasekuqaleni, i-architecture ye-Europaallee kunye neyona nto iqokelele kakhulu imbali yenkcubeko yaseSwitzerland ilindele apha kwi-castle ye-Landesmuseum Zurich. Ekugqibeleni kodwa, iFlauenmünster eZurich eyaziwayo kwihlabathi, eyaziwa ngehlabathi, iChagall yefestile yefriuenmünster ayikhunjulwa ngokupheleleyo kuyo yonke iindwendwe.
Ungathanda ukudibanisa uhambo lwakho lweedolophu ukuya eZurich kunye nolwazi olunzulu lokuthenga? Ingcinga efanelekileyo! I-Zurich ithandwa ngabantu abavela kwihlabathi lonke kwii-boutiques zayo ezikhethekileyo, iintengiso ezizodwa kunye neevenkile zabaqulunqi abaphezulu. Phakathi kwabanye uChrista de Carouge, i-Fabric Frontline, uHannes B. kunye noKönix basekhaya apha kwaye beza kunye neengubo ezinxibeleleyo zokugqoka, iimpahla zangaphantsi kunye nezicathulo. I-Swiss Casino eZurich ixakeke ngokukhawuleza kwiziganeko ezonwabisayo kunye nemidlalo eyahlukeneyo kunye neentambo. Kwabadlali abakhulu nabancinci bebhola yebhola, uZurich ukumema kwiMidlalo yeMidlalo yeBhola yeFIFA yeFIFA.
Uhambo lweSixeko ukuya kwi-Mulhouse Ville kwi-limousine
I-Mulhouse yaseFransi - i-half-hour drive yeBasel-izabelo kunye neBasel ne-Freiburg kwi-airport ye-EuroAirport. Abaninzi bethu abathengi bezoshishino basisebenzisa rhoqo inkonzo yethu yokudlulisa esuka eBasel Airport ukuya kwindawo yezolimo kwi-Mulhouse City e-Alsace. Isixeko esikuloo mida wesithathu sagqwesa ngokukodwa kwi-18. Ikhulu leminyaka njengenguvulindlela weenguqulelo zorhwebo zaseFransi kunye namajektri alo e-textile ebaluleke kakhulu. Ngabasebenzi abangaphezu kwe-10.000, uPegegeot ngumqeshi omkhulu kunazo zonke e-Alsace. I-Mulhouse City imimangalo kunye neendlela ezingafaniyo zokutshintshana phakathi kweempawu zeemveli zembali kunye neecawa zangexesha elide kunye nee-monastic orders, i-Fabric Printing Museum kunye neNational Museum yeCity de l'Automobile.
Ukongeza kwiidolophu zaseSwitzerland, eJamani neFransi, ngokuqinisekileyo sinokuqhuba umqhubi ukuya kwezinye iidolophu. Uza kufumana uluhlu lweendawo ezikhethiweyo kwiwebhusayithi yethu, nalapho uza kufumana amaxabiso okuthunyelwa kwe-moya yethu. Sibheke phambili kuwe yezohambo intanethi okanye ifowuni yakho ku-41 78 861 35 50.
Kuphawulwe: I-shuttle ye-Airport Basel moya Shuttle inkonzo yokuthuthwa sekhefu emzini
taxi.flughafen Aprili 6, 2017 Aprili 6, 2017 Akohlulwanga Akukho gqabaza
← I-BASELWORLD 2018 - Hamba ukhululekile kunye ne-Transfer Service yaseBasel